Zvinorevei kuti OEM / ODM mukugadzira mbatya?
ne admin pane 20-11-16
OEM neODM inzira mbiri dzekugadzira mbatya. Iwe pamwe wakavaona munzvimbo zhinji. Asi zvinorevei chaizvo? Ngationei. 1.OEM - Chekutanga Midziyo Mugadziri Iyo yekutanga michina inogadzira mune zvipfeko inozivikanwa seye chena chitaridzi mbatya mugadziri kana seyemukati ...
Inodziya Nguva Yechando Zvigadzirwa muLotte Nguo
Logo Yakasarudzika Hoodies Yakajairika nyaradzo hoodie ine kangaroo dhizaini muhomwe 2 * 2 mbabvu elastane mumakutu uye chiuno. Anti-kurapa kurapwa65% polyester / 35% donje rakapwanywa bvudzi 250g Kufananidza ruvara simbi yakapera kutenderera dhizaini Tsika dhizaini yerabha yakadhindwa logo ...
Kunzwisisa Mhando dzakasiyana dzeRuka
Fleece Basics Saka chii chinogadzirwa nemvere dzemakwai? Micheka yemvere dzakarukwa, uyezve rimwe divi rinokweshwa kusunungura tambo uye kugadzira kurara (kumusoro kwakasimudzwa) kwekunzwa, zvakapfava kunzwa. Yezvekutanga dehwe sweatshirt uye sweatpants, kazhinji mukati mehembe ini ...